स्ट्रोक:साढे चार घण्टाभित्र उपचार नगरे ज्यानै लिन्छ (भिडियोसहित) | Hamro Doctor News
By डा.राजु पौडेल, न्यूरोलोजिस्ट
बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै पाइला असन्तुलित भएमा, बोल्दा बोल्दै बोली लर्बराएमा, हात खुट्टा कमजोर भएमा स्ट्रोकको संकेत हुनसक्छ । अचानक आउने यस्ता परिवर्तनलाई हल्का ढंगले लिनु हुँदैन । यस्तो बेला समयमै ध्यान पुर्याउन सकेन भने व्यक्तिको ज्यान जाने खतरा रहन्छ ।
मधुमेहका बिरामी, चुरोट खाने बानी भएका व्यक्ति, मुटुरोगी र रगत पातलो बनाउने औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीलाई स्ट्रोकको सम्भावना बढी रहन्छ । वंशाणुगत रोगको कारण पनि कसैलाई यस्तो समस्या देखा पर्न सक्छ ।
८० को दशकमा स्केमिक स्ट्रोक बढी हुने गथ्र्यो भने सन् २०१४ मागरिएको सर्वेक्षण अनुसार हेमोरेजिक स्ट्रोकको अवस्था ४० देखि ५० प्रतिशतमा हुने गर्छ । यो कुनै पनि उमेर समूहका मानिसलाई हुनसक्छ । खासमा ५० बर्ष नाघि सकेका व्यक्तिलाई अरुलाई भन्दा स्ट्रोकको खतरा दुई गुणा बढी हुन्छ । एक्कासी श्वासप्रश्वास, रक्तचाप र मुटुको धड्कनमा परिवर्तन देखा परेमा स्ट्रोक भएको आशंका गरिन्छ ।
स्ट्रोक दुई किसिमको हुन्छ
दिमागको कुनै भागमा असर गरेर नशामा रगत जम्ने हेमोरेजिक स्ट्रोक हो । जसको उपचार साढे चार घण्टा भित्र गरिएन भने मृत्युको खतरा हुन्छ । यस्तो भएमा मस्तिष्क (गिदी) सुन्निने खतरा रहन्छ । जसलाई ‘ब्रेन सोलिङ’ भनिन्छ ।
स्ट्रोकका कारण दिमागको एउटा नशा मरिसकेपछि त्यसलाई पुनःजीवित गर्न सकिँदैन यस्तो अवस्थामा दिमागमा रहेका अन्य नशाले मरेको नशाको काम गर्ने हुन्छ ।
गिदी सुन्निएर दिमागमा उच्च रक्त श्राव भयो भने अपरेशन गर्नु पर्ने न्यूरो विशेषज्ञ राजु पौडेलले बताए । ‘हेमोरेजिक स्ट्रोक भएका सबै बिरामीको अप्रेशन गर्न पर्दैन ।’ उनले भने ‘कोहीलाई अप्रेशनविनै औषधिबाट उपचार गर्न सकिन्छ ।’ तर, उच्च रक्तचाप भएका बिरामीमा रक्त श्राव भएमा अपरेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । अप्रेशन गरेर उनीहरूको ज्यान जोगाउनुका साथै पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ । समयमै उपचार नभए यसले बिरामीलाई दीर्घकालीन रुपमा पक्षघात बनाइदिन सक्छ । स्ट्रोक भएको बिरामीलाई समयमै अस्पतालमा उपचारको लागि लगिएन भने बिरामीको मृत्यु समेत हुनसक्छ ।
रगतको नशा बन्द हुने अवस्थालाई स्केमिक स्ट्रोक भनिन्छ । शरीरको जुनभागमा रगत ‘क्लट’ भइ नशा बन्द भएको हो त्यस भागमा पक्षघातको समस्या देखिन सक्छ । आँखा, मुखवा शरीरका विभिन्न भागमा रगत जम्न थालेमा ती अंगहरूमा स्ट्रोकको असर देखिन थाल्छ ।
स्ट्रोकबाट कसरी बँच्ने ?
सामान्य मानिसमा बोल्दा वा हिँड्दामा असन्तुलन आयो भने स्ट्रोकको खतरा हुन्छ । त्यसकारण यस्तो लक्षण देखिएको केही समयमै उपचारका लागि अस्पताल ल्याउन सके बिरामीलाई बचाउँन सकिन्छ ।
यस्तो लक्षण देखिएको अवस्थामा पनि ‘केही हुँदैन’ भनेर हेलच्यक्राई गरेर बस्यो भने स्ट्रोकबाट ज्यानै जाने खतरा हुन्छ । स्ट्रोक भएका व्यक्तिलाई जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पु¥याएर उपचार गराउन सक्यो भने उसको रिकभरको सम्भावना धेरै हुन्छ । नभए अप्रेशन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
स्ट्रोक भएकाको उपचार कसरी हुन्छ ?
स्ट्रोकको उपचारका लागि चिकित्सकको सिंगो टीम लागेको हुन्छ । जसमा न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिसियन, रेडियोलोजिस्ट र इमर्जेन्सीको टीम रहन्छ । स्ट्रोकका बिरामीलाई शुरुमा सिटी स्क्यान र एमआरआइ गरेर बिरामीको अवस्था बुझ्ने गरिन्छ । एमआरआई गर्दा स्ट्रोकका बिरामीमा आइपर्ने परिवर्तनहरू बुझ्न सहयोग हुने तथा शरीरको कुन भागमा असर परेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
स्ट्रोकको बिरामीलाई साढे चार घण्टाभित्र थ्रम्बोलोसिस उपचार
स्ट्रोकका बिरामीको नशामा रगत जमेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा थ्रम्बोलोसिस् उपचार विधिबाट औषधिप्रयोग गरी रगत पघाल्न सकिन्छ । उपचारको लागि टीपीए नामक औषधि साढे चार घण्टाभित्र दिन सक्यो भने बन्द भएको रक्त नली खोल्न सकिन्छ । स्ट्रोक भएको हरेक सेकेण्डमा नै न्यूरोजनहरू मर्न थाल्छन । त्यसैले बिरामीलाई जतिसक्दो चाँडो उपचारमा लग्नु पर्ने चिकित्सक बताउँछन् ।
Last modified on 2019-02-12 22:40:35